Madaxweyne ku xigeenka Maaliyadda iyo Hawlgabka
Intii ay ku jirtay hawsheeda, Higdon waxay muujisay xirfad weyn iyo guul ay ku abuurto nidaamyo horseed u ah wax ku oolnimada abaabulka iyo saamaynta. Muddo 12 sano ah, waxay qabtay doorar hoggaamin sare ah oo u adeega YMCAs, kuna takhasustay agabyada aadanaha, hawlgallada, lacag ururinta, iyo guddiga iyo kaqeybgalka bulshada. Ka hor inta aysan ku biirin McKnight, waxay ahayd kuxigeenka madaxa howlaha iyo agaasimaha fulinta ee YMCA ee Twin Cities Great. Intaas ka hor, waxay ahayd kuxigeenka sare ee hawlgallada iyo sarkaalka hawlgalka ee YMCA ee Greater Hartford, iyo kuxigeenka madaxa fulinta ee hawlgallada iyo madaxa sarkaalka kheyraadka aadanaha ee YMCA ee Greater Cleveland.
Higdon wuxuu heystaa shahaadada JD oo ka socota Kuliyadda Sharciga ee Cleveland-Marshall, Jaamacada Cleveland, iyo BA ee maamulka ganacsiga oo xoogga saareysa ilaha aadanaha ee Jaamacadda David N. Myers University. Waxay ka shaqeysay Navy Navy ee Mareykanka ah sarkaalka Saddexaad ee loo yaqaan 'E-4 Petty Officer'. Waxay sidoo kale ahayd hoggaamiye firfircoon xagga nolosha bulshada, iyadoo ku tabarucday Cleveland-Marshall Kuliyadda Sharciga ee Alumni Association Outurach; Machadka Benjamin Rose ee guddiga agaasimayaasha gabowga; iyo Walaalaha Big Big ee Mareykanka.